1. Ukusebenza kulula futhi konga abasebenzi, izinga lokwehluleka liphansi, amandla okusika aqinile, futhi isivinini sokwephula umthwalo siyashesha, ngaphezu kwezikhathi eziyi-1000 ngehora.
2. Idivayisi yokubeka isikhunta se-Knife, ukulungiswa kwesikhunta sommese ophezulu futhi ophansi, kulula kakhulu, kunembile futhi kuyashesha.
3. Umsindo othule nophansi ngesikhathi sokusebenza uthuthukisa indawo yokusebenza.
4. Idivayisi yokulungisa kahle ingathola kalula ukushaywa okungcono kakhulu futhi yandise impilo yensiza yabadayisi nebhodi lokusika.
5. Kunendlela yokusebenza ephephile.
Oily glue laminating umshini KP-YJ128C
1.Umshini wonke ufakwe ukuqaqa, ukulungisa okuzenzakalelayo kokuphambuka, ukomisa kwangaphambili, ukomisa okuyinhlanganisela, ukupholisa amanzi, ukusika okuzenzakalelayo, ukuminyanisa kobuso nezinye izingxenye. Izinto ezihlanganisiwe zinezinzuzo zokumataniswa okufanayo, ukuhlanganiswa okubushelelezi, akukho ukusonteka okwelulekayo, akukho amagwebu, akukho mibimbi, ukuzwa kwesandla okuhle, ukuthamba, ukuvunyelwa komoya okuhle kakhulu nokugoqa okucocekile.
2. Kunezinhlobo eziningi zezinto ezihlanganiswayo, ikakhulukazi ezifanele ukumbozwa nokuhlanganiswa kwezindwangu nezindwangu, izindwangu ezingezona ezelukiwe nezindwangu, izindwangu ezingalukiwe nesikhumba, isiponji ne-flannel, isipanji nesikhumba, njll.
3. Ukubuyisela emuva futhi ukuphumula kungakhetha ukumiswa okufanelekile ngokuya ngezinto ezihlukile;
I-PUR incibilika umshini wokunamathisela oshisayo we-PUR-101A
I-PUR incibilika umshini wokunamathisela oshisayo we-PUR-101B
I-PUR eshisayo encibilikisa umshini wokunamathisela i-TH-101C
Umshini Wokunamathisela Okushisayo Wokuncibilika Okushisayo NgeSitifiketi seCe, Umshini Wokunamathisela we-Pur Hot Melt Glue Nonwoven, I-Hot Melt Glue Isicelo, Okuzenzakalelayo Hot Melt Glue wokulaminetha Machine, Umshini Oshisayo Wokunamathisela Okushisayo Wengubo Engubo, Umshini Wokushisa we-Pur Hot Melt Adhesive Laminating,